GOOBAHA DAGAALKA: Saddexda Meelood Ee Ay Ku Kala Guuleysan Karaan Liverpool & Everton – Latest Sports News
GOOBAHA DAGAALKA: Saddexda Meelood Ee Ay Ku Kala Guuleysan Karaan Liverpool & Everton
Kulanka xamaasadda badan ee loo yaqaano Merseyside Derby ayaa maanta ka dhici doonta waddanka Ingiriiska, waana ciyaarta ay iskaga hor yimaaddaan kooxaha isku magaalada ah ee Everton iyo Liverpool.
Ciyaartan oo ka dhacaysa garoonka Goodison Park ee Everton, ayaa dhacaysa xilli ay hoggaanka isku ballaadhisay Manchester City oo si KMG ah u qabatay mrkii ay shalay guul dirqi ah heshay.
Haddii aad tahay taageere Liverpool ah, ama si wanaagsan ula socda ciyaaraha waddanka Ingiriiska iyo natiijooyinkooda, waxaad ogtahay in ciyaartii iskugu dambaysay labadan kooxood ee bishii December ay Reds ku adkaatay 1-0 uu goolkana dhaliyey Divock Origi xilli dambe, balse maanta ayay baahidii ugu weynayd u qabtaa inay guushaas oo kale gaadho iyadoo weliba marti ah.
Liverpool oo haysata 69 dhibcood ayaa haddii ay guuleysato waxay yeelan doontaa 62 dhibcood, waxaanay hal dhibic ka sarrayn doontaa Manchester City oo hoggaanka la wareegtay Sabtidii, kulankana wuxuu noqonayaa mid xamaasad badan oo ay hadhayn doonto colaadda ay isku qabaan labada naadi.
Everton ayaa wax walba u samayn doonta sidii ay saddexda dhibcood ee ciyaartan u heli lahayd, amaba ugu yaraan ay uga hor-joogsan lahayd in cadowgeedu uu hoggaanka horyaalka qaato, taas oo ay ka xigaan dhimasho.
Haddaba shabakadda Cadalool waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa saddex meelood oo uu ka iman doono dagaalka ugu weyn ee labadan kooxood, kuwaas oo ah halka laga go’aamin doona kooxda ugu dambayn guusha la hoyan doonta.
Weeraryahanka Liverpool ee Mohamed Salah waxa uu mar kale ka hor tegi doonaa Lucas Digne oo ay hore xili ciyaareedkan iskugu xagxagteen garoonka gudihiisa.
Sida Salah oo kale, difaaca reer France ee Lucas Digne waa mid xarfad badan, dheereeya orodka oo aanay cidi soo qaban karin, sidoo kalena celin kara weerar kasta oo ka hor yimaadda, waxaana taas uu ku muujiyey ciyaartii badhtamihii toddobaadkii hore ay 3-0 ku xasuuqeen Cardiff City, waxaanu rajaynayaa inuu mar kale bandhiggiisaas cajiibka ah kusoo bandhigo ciyaarta ay maanta ku martigelinayaan Liverpool.
Dhinaca kale, Mohamed Salah oo u dhashay waddanka Masar, waa mid ka mid ah ciyaaryahannada ay difaacu ugu baqashada badan yihiin, isla markaana il gaar ah lagu hayo inta uu garoonka ku jiro, sababtoo ah, fursad yar oo uu helo ayuu ku burburin karaa rajada kooxda kasoo horjeedda.
Xili ciyaareedkan socda, waxa uu kooxdiisa Liverpool u dhaliyey 17 gool oo horyaalka Premier League ah, sidoo kalena waxa uu qayb libaax kasoo qaatay sooyaalkii Champions League ee ay ugu soo gudbeen wareegga 16-ka oo ay Bayern Munich isku beegmeen, lugtii horena ay goolal la’aan barbarro ah ku kala baxeen.
Ka sokow inuu yahay laacibka haysta abaal-marinta xiddiga sannadka ee Ingiriiska, haddana waxa jiray kulamo badan oo uu u muuqday inuu hoos uga dhacay heerkiisii xili ciyaareedkii hore, hase yeeshee kulanka maanta qaabka uu u shaqeeyo waxay qayb ka qaadan doonaan ugu dambayn kooxda guusha la hoyan doonta.
Riix 2 & 3 si aad u wada akhrisato warbixinta oo dhan